आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी सरकारले एकाएक गर्याे यस्ताे कडा निर्णय, सबै नेपालीले थाहा पाउनैपर्ने — Imandarmedia.com
आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी सरकारले एकाएक गर्याे यस्ताे कडा निर्णय, सबै नेपालीले थाहा पाउनैपर्ने
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशमा प्रवेश गर्ने सबै नाका एक हप्तासम्म पूर्ण रुपमा बन्द (सिल) गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको विपद व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले सवारी तथा पैदलमार्ग पूर्ण रुपमा बन्द गरी लकडाउन मजवुत बनाउने निर्णय गरेको हो ।
पहिलो संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क भएका ९० जनाको स्वाब संकलन गरेर ६० जनाको परीक्षण गर्दा नेपालगञ्जको एउटै टोलका १५ जना व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको डा. गिरीले बताए । आइतबार संकलन गरिएका स्वाबमध्ये ३० जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । संक्रमित सबैलाई बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको र अवस्था सामान्य रहेको उनले बताए ।
सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदी, बाँके-२ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, बाँके ३ का सांसद नन्दलाल रोकाया, अर्का सांसद सर्वतआरा खानले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई मन्त्रालयमै पुगेर भेट गरी माग राखेका हुन् । भेटमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले दुई सय ५० थान किट पठाउन लगाएको र अन्य सामग्री पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
काठमाडौंमै अल्मलियो सरकार ! लकडाउन लम्ब्याउने, टेस्टचाहिँ नगर्ने
संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा लकडाउनमा बसेको सोमबार ४२ दिन भयो । लकडाउनपछि धादिङका एक पुरुष र सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका आमा छोरामा संक्रमण भेटियो । उनीहरु निको भएर घर फर्किसके । नयाँ संक्रमित नभेटिएको २२ दिन भयो ।
विदेशबाट संक्रमण बोकेर मानिसहरु काठमाडौं आउने सम्भावना पनि छैन । अन्तराष्ट्रिय उडान चैत ९ गतेदेखि नै बन्द छन् । जेठ ३ गतेसम्म उडान खुल्ने सम्भावना पनि छैन ।त्यसो हो भने काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन किन खुकुलो नबनाउने ? सर्वसाधारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु पनि यही प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
उनीहरुमध्ये एक हुन् डा. समीरमणि दीक्षित । उनी भन्छन्, ‘अरु केही नगर्ने हो भने अर्को ६ हप्ता लकडाउन गरे पनि अवस्था त्यही रहन्छ । अनि कहिलेसम्म लकडाउन गर्ने ?’ ४२ दिन लामो लकडाउनका कारण व्यपाार व्यवसाय ठप्प भएको छ । दीर्घरोगीहरुको नियमित उपचार रोकिएको छ ।
खोज लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरु समस्यामा परेका छन् । ‘यो सबैले मानिसहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेको छ र, कोभिड-१९ ले भन्दा अरु रोगका कारण धेरै मानिसहरु मर्ने अवस्था आउन सक्छ’ उनी भन्छन् ।
यो कायम रहँदासम्म उपत्यकालाई ग्रिन (सेफ) जोन भन्न नसकिने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. दीक्षित बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले यहाँबाट गएका मानिसहरु फेरि फर्किन थालेका छन् । यो कायम रहँदासम्म गि्रन जोन भन्न सकिन्न ।’
यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने गरी नभइ पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी आउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाभाइरसले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए । कोरोना जोखिम न्यूनीकरण अबको बजेटको प्राथमिकता हुनेछ ।
यता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले आगामी बजेट ठुला र नयाँ कार्यक्रम भन्दा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘पहिले पूर्वाधारको बजेटमा बढी जोड दिइन्थ्यो यसपटक अवस्था फेरिएको छ, स्वास्थ्य, शिक्षामा बढी फोकस हुनुपर्नेछ ।’
आयोगकै एक सदस्य शुशील भट्टले पनि अधुरा आयोजना पुरा गर्ने र गेमचेन्जर आयोजना प्राथमिकतामा पारेर बजेट आउने भनेका थिए । आयोगले मन्त्रालयहरुलाई अधुरा आयोजनाको विवरण पठाउन समेत परिपत्र गरिसकेको छ ।
आयोगले गत माघमा आगामी आवको लागि बजेटको आकार तोकेर अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । तर चैतदेखि कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि आर्थिक गतिविधि न्युन भयो जसले राजस्व प्रभावित भयो । बैशाख मसान्तसम्मको अवस्था हेरेर सिलिङ परिमार्जन हुन सक्ने र विगतकै हाराहारीमा बजेट आउने आयोगका उपाध्यक्ष कडेलले रातोपाटीकै एक अन्र्तवार्तामा भनेका थिए ।